निर्वाचनको संघारमा युरोपेली संघको भेटघाट तिव्र - निर्वाचनको संघारमा युरोपेली संघको भेटघाट तिव्र
निर्वाचनको संघारमा युरोपेली संघको भेटघाट तिव्र
नेपालबहस संवाददाता २०७४, २१ कार्तिक, 01:03:56 AM
२१ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग नेपालका लागि युरोपेली संघको मिसनका प्रमुख पर्यवेक्षक जेल्जन जोब्कोले भेट गरेका छन् ।
सिंहदरबारमा हिजो भएको भेटमा उनीहरुबीच प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको बारेमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराइले जानकारी दिए ।
त्यस अवसरमा प्रमुख पर्यवेक्षक जोब्कोले निर्वाचनको तयारी र निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलको सहभागिताका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका थिए ।
उनले निर्वाचनमा आफूहरुले प्रभावकारी रुपमा पर्यवेक्षण गर्ने र निर्वाचनमा देखेको कुरा सुझावका रुपमा सरकारलाई बुझाउने जानकारी गराउनुभएको परराष्ट्र सल्लाहकार डा. भट्टराईले बताए।
भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफूहरु सबै दलको सहमतिमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया संस्थागत गर्न लागेको भन्दै निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न हुने बताएका थिए ।
हिजो नै प्रधानमन्त्री देउवासँग नेपालका लागि म्यानमारका राजदूत ल्विन ओले बिदाइ भेट गरे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटमा उनीहरुबीच २ मुुलुकको आपसी सम्बन्ध र हितका बारेमा कुरा भएको थियो ।
यसैवीच नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग यूरोपेली संघका प्रतिनिधिमण्डलले हिजो शिष्टाचार भेट गरेकोे छ ।
सिंहदरबारमा भएको सो भेटमा आगामी मंसिर १० र २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको पर्यवेक्षणका विषयमा छलफल भएको थियो ।
सो अवसरमा अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निश्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन आफ्नो पार्टीको सकारात्मक भूमिका रहने बताउँदै त्यसको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नका लागि यूरोपेली संघका प्रतिनिधिमण्डललाई आग्रह गर्नुभएको भेटमा सहभागी एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य विष्णु रिमालले बताए।
निर्वाचन निष्पक्ष गराउनेबारेमा निर्वाचन आयोगको भूमिका र प्रतिबद्धताका बारेमा प्रतिनिधिमण्डलले जिज्ञासा राखेका थिए ।
सो जिज्ञासाका जवाफमा अध्यक्ष ओलीले आफू अहिले कसैलार्ई दोष लगाउने पक्षमा नरहेको भन्दै मतपत्रको विषयमा उठाइएको विवाद निर्वाचन प्रभावित पार्ने लक्ष्यका साथ गरिएको प्रपञ्चको रुपमा लिइएको उल्लेख गरे ।
“निर्वाचन सार्नका निम्ति प्रयास भएका थिए, ती सफल भएनन् र हुँदैनन् पनि”अध्यक्ष ओलीले भने । नेपाललाई स्थायी सरकार दिन, बिकास र समृद्धितर्फ अघि बढाउनका लागि वाम तालमेल भएको उनले बताएका थिए ।
२०७४, २१ कार्तिक, 01:03:56 AM
‘तेस्रोलिङ्गी’ र ज्यानमारा कम्युनिस्ट : जंगबहादुर र कोतपर्वको रिहर्सल !